भागरथी हत्याको ११ दिनः गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार तर अझै पुगेन मृतकका आँगनमा प्रदेश सरकार ! – Sodhpatra
भागरथी हत्याको ११ दिनः गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार तर अझै पुगेन मृतकका आँगनमा प्रदेश सरकार !
प्रकाशित : ३ फाल्गुन २०७७, सोमबार १९:४९ February 15, 2021
केन्द्रीकृत शासन जनताका घरदैलोमा नपुगेपछि ठूलो मूल्य चुकाएर मुलुक संघीयतामा प्रवेश ग¥यो । संघीयतासँगै घरघरमै सरकार पुग्ने सपना बाँडियो । तर, बैतडी दोगडाकेदार–७ चडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको ११ दिनसम्म पनि प्रदेश सरकार घटनास्थल पुगेको छैन । न सन्तानवियोगको पीडामा रहेकी भागरथीकी आमालाई सान्त्वना दिन पुगेको छ ।
स्थानीयले मुख नखोल्दा अनुसन्धान लम्बिएको प्रहरीको भनाइ छ । बिस्तारै स्थानीयहरूबाट पनि सूचना आउन थालेकाले सफलतानजिक रहेको भन्ने पुरानै भनाइ भने प्रहरीले दोहो¥याइरहेको छ । ‘हामीले व्यक्तिविशेष र समूहविशेषमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छौँ,’ एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘भागरथीको हत्यापछि अधिकांश स्थानीयले मोबाइलमा कल र मेसेज हिस्ट्री डिलिट गर्ने गरेको भेटियो । यो देखेर हामी अचम्मित भइरहेका छौँ ।’ -नयाँ पत्रिकाबाट